क्यान्सर « Imagekhabar – Online News Portal of Nepal
एजेन्सी । भारतीय अभिनेता संजय दत्त केहि समय अगाडि क्यान्सर रोगबाट पीडित भएका थिए । उपचार पछि उनी अहिले पूरै ठिक भएका छन् । साथै उनी फिल्ममा पनि फर्किएका छन्
१५ सय बालबालिकामा क्यान्सर, उपचारका लागि आएका ८० प्रतिशत निको भएको चिकित्सकको भनाइ
नेपालमा यस्तो क्यान्सरको उपचार विशेषगरी सरकारी अस्पतालहरूमा नै हुँदै आइरहेको छ । यी संस्थाहरूलाई थप सुदृण बनाउनुकासाथ साथै बाल क्यान्सर नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय रणनीति नै आवश्यक रहेको डा. गिरी बताउनुहुन्छ
वीरमा रेडियोथेरापी मेसिन नहुँदा क्यान्सरको उपचार प्रभावित
काठमाडौं । वीर अस्पतालमा ६ वर्षदेखि रेडियोथेरापी मेसिन जडान हुन नसक्दा क्यान्सरको उपचार प्रभावित, सरकारी लापरवाहीले बिरामी महंगो शुल्क तिरेर निजी अस्पतालमा उपचार गराउन बाध्य भएका छन् । आमनागरिकलाई सस्तो
सबैभन्दा धेरै पाठेघरको मुखको क्यान्सर : डा. रोशनी उलक (अन्तर्वार्ता)
काठमाडौं, माघ २१ । फेब्रुअरी ४ अर्थात आज (शुक्रबार) विश्व क्यान्सर दिवस । नेपालमा पनि विभिन्न सचेतना मुलक कार्यक्रहरु गरेर यस वर्ष ‘बढ्दैछ चुनौति क्यान्सरको, पहुँच बढाऔँ स्याहार’को भन्ने नारासहित
काठमाडौं, भदौ २५ । सरकारले मृगौला, क्यान्सर र हृदयघात दीर्घ रोगीहरूलाई मासिक पाँच हजारका दरले रकम दिने भएको छ । शुक्रबार संसदमा प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दीर्घरोगीलाई
क्यान्सरका बिरामी कांग्रेसका नेता सत्याललाई सहयोग हस्तान्तरण
काठमाडौं । क्यान्सरका बिरामी नेपाली कांग्रेस काठमाडौंका नेता वडा नम्बर ३० का वडा सदस्य निरज सत्याललाई छ लाख ६४ हजार छ सय ५८ रुपैयाँको चेक हस्तान्तरण गरीएको छ । अमेरिका
वीर अस्पतालमा लापरबाहीको चरम रूप, किनेको तीन वर्षसम्म थन्किए ४८ कराेडकाे मेसिन
वीर अस्पतालमा उपचारमा आउने क्यान्सर रोगीलाई रेडियोथेरापीका अन्यत्र पठाउने गरिएको छ । भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा रेडियोथेरापी गराउने बिरामीको चाप बढ्दो छ ।
क्यान्सर जितेका कांग्रेस नेताको कोभिडबाट निधन
मल्लले निरंकुश शासन व्यवस्था विरुद्ध नागरिकका स्वतन्त्रताका पक्षमा आवाज उठाउँदै प्रतिबन्धित अवस्थामा जेलनेल भोग्नुभएको थियो । उहाँले डेढ वर्षअघि क्यान्सर रोगलाई जित्नुभएको थियो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईलाई ट्युमरमा क्यान्सर नभएको पुष्टि
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जसपा संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईको न्युरो- इन्डोक्राइनको ट्युमरमा क्यान्सर नभएको पुष्टि भएको छ । वायोस्पी, डोटा एनओसी परीक्षण, इड्रोस्कोपी अल्ट्रासाउन्ड, पेट सिटिस्कस्यान लगायतको परीक्षणपछि क्यान्सर